အသက်(၃၀) မှာ အမိုက်စား စော်ကြီး ဖြစ်ရမယ်လို့ နေခြည် ဦး ပြောပြီ ဘယ်လိုမျိုးများလဲ? – Zartiman
အသက်(၃၀) မှာ အမိုက်စား စော်ကြီး ဖြစ်ရမယ်လို့ နေခြည် ဦး ပြောပြီ ဘယ်လိုမျိုးများလဲ?
အလေ့အကျင့်ကောင်း တစ်ခုကို လုပ်နိုင်ပြီဆို လွယ်လွယ်နဲ့ မရပ်လိုက်နဲ့နော်။ နေခြည် အခု yoga တစ်လနားပြီး ပြန်ဆော့ တဲ့အခါ ကြွက် သားတွေ တောင့်တင်း နေတာ အရင်လို ပြန်ဖြစ် ဖို့ ပြန်လေ့ကျင့် ရတော့မယ်” ဆိုပြီး သူ ကြုံတွေ့ နေရတဲ့ ပြဿနာလေး ကို ပြောပြခဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အဖက်ဖက်က ပြီးပြည့်စုံအောင် ကြိုးစားနေသူပီပီ “အသက်သုံးဆယ်မှာ အမိုက်စားစော်ကြီး ဖြစ်ရမယ်” ဆိုပြီးတော့ လည်း သူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကို မျှဝေခဲ့ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ..ဘယ်လိုမျိုးများလဲ?
အချိန်တို အတွင်း ပရိသတ်အသိမှတ်ပြု အားပေးမှုရရှိလာသူ နေခြည်ဦးကတော့ မိဘထောက်ပံ့မှု အားကောင်းရုံမက ကိုယ်တိုင်လည်း အ ရည်အချင်း အပြည့်အဝရှိသူ တစ်ယောက်ပါ။ အနုပညာရှင်တစ်ယောက် လုပ်ဖို့ ရွေးချယ်လိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အ ကောင်းမွန်ဆုံးတည်ဆောက်ဖို့ တစ်ရက်မှ မနားဘဲ အချိန်ရှိသရွေ့ တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း လုပ်နေသူဆိုရင်လည်း မမှားပါဘူး။
အနုပညာရှင် တစ်ယောက်မှာ ရှိသင့်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ထိန်းသိမ်းဖို့ အတွက် Gym ဆော့တာအပြင် မနက်တိုင်း လက်ဝှေ့ထိုးကျင့်ခြင်း ၊ ယောဂဆော့ခြင်းတို့ကို အချိန် တစ်ခုပေးပြီး သေချာလုပ်နေသူပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီကြားထဲမှာ ယောဂဆော့ဖို့ တစ်လပျက်ခဲ့တဲ့ ချီချီကတော့ အလေ့အကျင့်ကောင်းတွေကို လုပ်နိုင်ပြီဆို မရပ်ကြဖို့ သူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
အလအေ့ကငျြ့ကောငျး တဈခုကို လုပျနိုငျပွီဆို လှယျလှယျနဲ့ မရပျလိုကျနဲ့နျော။ နခွေညျ အခု yoga တဈလနားပွီး ပွနျဆော့ တဲ့အခါ ကွှကျ သားတှေ တောငျ့တငျး နတော အရငျလို ပွနျဖွဈ ဖို့ ပွနျလကေ့ငျြ့ ရတော့မယျ” ဆိုပွီး သူ ကွုံတှေ့ နရေတဲ့ ပွဿနာလေး ကို ပွောပွခဲ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အဖကျဖကျက ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ကွိုးစားနသေူပီပီ “အသကျသုံးဆယျမှာ အမိုကျစားစျောကွီး ဖွဈရမယျ” ဆိုပွီးတော့ လညျး သူ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ ပရိသတျကွီးရေ..ဘယျလိုမြိုးမြားလဲ?
အခြိနျတို အတှငျး ပရိသတျအသိမှတျပွု အားပေးမှုရရှိလာသူ နခွေညျဦးကတော့ မိဘထောကျပံ့မှု အားကောငျးရုံမက ကိုယျတိုငျလညျး အ ရညျအခငျြး အပွညျ့အဝရှိသူ တဈယောကျပါ။ အနုပညာရှငျတဈယောကျ လုပျဖို့ ရှေးခယျြလိုကျပွီး နောကျပိုငျးမှာ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အ ကောငျးမှနျဆုံးတညျဆောကျဖို့ တဈရကျမှ မနားဘဲ အခြိနျရှိသရှေ့ တိုးတကျရာ တိုးတကျကွောငျး လုပျနသေူဆိုရငျလညျး မမှားပါဘူး။
အနုပညာရှငျ တဈယောကျမှာ ရှိသငျ့တဲ့ခန်ဓာကိုယျကို ထိနျးသိမျးဖို့ အတှကျ Gym ဆော့တာအပွငျ မနကျတိုငျး လကျဝှထေို့းကငျြ့ခွငျး ၊ ယောဂဆော့ခွငျးတို့ကို အခြိနျ တဈခုပေးပွီး သခြောလုပျနသေူပါ။ ဒါပမေယျ့ ဒီကွားထဲမှာ ယောဂဆော့ဖို့ တဈလပကျြခဲ့တဲ့ ခြီခြီကတော့ အလအေ့ကငျြ့ကောငျးတှကေို လုပျနိုငျပွီဆို မရပျကွဖို့ သူကိုယျတိုငျကွုံတှနေ့ရေတဲ့ ဥပမာလေးနဲ့ ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
ပုရိသတွေမနေနိုင်အောင် ချစ်စရာအရမ်းကောင်းနေတဲ့ ချောကလျာ
အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ပုရိသတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ မိုးမြင့်သဇင်ရဲ့ ဗီဒီယို